Luna Iyo Shadow Guruva: graphical adventure yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
LUNA Iyo Shadow Guruva ipuzzle-based adventure mutambo unouya weLinux, Mac uye Windows. Kutenda kuedza kweLantern Studio isu tichava nazvo papuratifomu yedu mushure mekubudirira kweKickstarter mushandirapamwe, uye kuti uchave nazvo chiutsi mukati megore rino. Izvo zvinoita kuti tifare, nekuti aya marudzi emitambo yeindie dzimwe nguva ane chekuita zvishoma nemazita makuru eAAA, asi ndizvo chaizvo zvinoita kuti zvinyanye kufadza kubuda mutsika yatakatigadzirira situdiyo huru.
LUNA Iyo Shadow Dust yatove neDEMO vhezheni yekutamba paMac neWindows, zvisinei, iyo Windows .exe inogona kumhanyisa pasina matambudziko paLinux nerubatsiro rweWine, kana iwe uchida kuyedza. Kana iyo yekupedzisira vhezheni ikaonekwa, pachave nechizvarwa chiteshi cheLinux, saka haufanire kunetseka nezvazvo. Kuenderera mberi neongororo yezvatakaona, zvinoyeuchidza basa raHayao Miyazaki rehupenyu hwechinyakare.
Iyo inotaurira nyaya yemukomana uye chipfuyo chisingazivikanwe chinogara mukati nyika yakaita sekurota yengano. Iyo yakanakisa graphic adventure ine huru nyaya mune ino enchanted nyika iyo isu tichafanirwa kukunda kuburikidza nemasaiti akavakirwa pamapuzzle atinofanira kugadzirisa. Basa rako rinenge riri rekudzoreredza chiyero chakange charasika uye zvakajairika hazvizotonge kusvikira mwedzi wasimuka zvakare.
Yese iyi aura yezvakavanzika ichatitora kuti tifambe kuburikidza nenguva uye tinopinda odyssey kuburikidza neyakajeka nyika iyo yatinoratidzwa, tichitsvaga kudzoreredza ndangariro yemwana kugadzirisa chakavanzika chakavanzika chakavanzwa. Zvese zvinoperekedzwa nechisikwa icho isu seshamwari uye chipfuwo. Ehezve, zvinodzora zvichave classic point & tinya ma mechanics. Hazvina kunaka here izvi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Luna iyo Shadow Guruva: graphical adventure yeLinux
Ini ndinoda "Point & Dzvanya" mitambo yemitambo.